IDRA-21 အမှုန့်သောက်သုံးသော၊ ဝက်ဝံဘဝ၊ အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်သုံးသပ်ချက်များ
1. IDRA-21 အမှုန့်ကဘာလဲ။
သင့်အားအစွန်းရောက်စေနိုင်သောအရာတစ်ခုခုကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေခြင်းသည်လုံးဝလူသားဖြစ်သည်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်လူအများစုက nootropics လို့လူသိများတဲ့စမတ်ဆေးတွေကိုပြောင်းလဲသုံးစွဲလာကြပြီ။ သင်သည်သင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်ဟုဆိုသည့်ဖြည့်စွက်ချက်များစွာကိုတွေ့ခဲ့ရသော်လည်းသင်မည်သည့်အရာကအလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်မမေးမြန်းတော့ပါသလော။ IDRA-21 benzothiadiazine ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းပုံမှဆင်းသက်လာခဲ့သည့်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ IDRA-21 သည် Aniracetam နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုပြောဆိုမှုများရှိသည်။ ၎င်းသည်အခြား nootropic IDRA-21 ထက်အဆ ၃၀ အားနည်းသည်။ IDRA-21 သည်ဟောပြောချက်လမ်းလျှောက်နေသော nootropic ဖြစ်သည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်၏မှတ်ဉာဏ်၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ အတွေးဖြစ်စဉ်များနှင့်သင်၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်စေရန်အတွက်လာရောက်လည်ပတ်သောအကောင်းဆုံး nootropics တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဈေးကွက်တွင်အသစ်အဆန်းဖြစ်သဖြင့်ပိုမိုနားလည်ရန်သုတေသနသည်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည် 22503-72-6 မှတ်ဥာဏ်၊ သိမြင်မှုစွမ်းရည်နှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုကိုပြန်ပြောင်းလိုက်ခြင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
2. IDRA-21 မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
ampakine ဆေးတစ်ခုအနေဖြင့် IDRA-21 သည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိ glutamate AMPA receptors ၏အပြုသဘော allosteric မော်ဂျူလာဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ AMPA receptors များသည်လျင်မြန်စွာ synaptic transmission ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့် excitatory synaptic strength တိုးပွားလာသည်။ ၎င်းကို allosteric activation ဟုလည်းလူသိများသည်။
3. အကြံပြုထားသောသောက်သုံးသော / IDRA-21 ၏ညွှန်ကြားချက်ကိုအသုံးပြုခြင်း
IDRA-21 ကိုတိရိစ္ဆာန်များတွင်သာစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သော်လည်းလူအများအပြားက၎င်းကိုအသုံးပြုပြီးအခြားသူများမှာမူစမ်းသပ်ဆဲဖြစ်သည်။ လူကြိုက်များသော nootropic ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူအများစုသည်အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိစေသည့်အကောင်းဆုံးသောက်သုံးသောပမာဏကိုပြောဆိုကြသည်။ များစွာသောသတင်းရင်းမြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည် IDRA-21 သောက်သုံးသော ၄၈ နာရီအတွင်း ၁၀ မီလီဂရမ်အထိသောက်သင့်သည်။ သင်က၎င်းကိုရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုစားရန်အတွက်ဖန်ခွက်သာလိုအပ်သောကြောင့်အစားအစာမတိုင်မီသို့မဟုတ်ပြီးနောက်၎င်းကိုသင်သောက်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ဤ nootropic နှင့်သင်ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့လျှင် IDRA-10 သောက်သုံးသောပမာဏဖြင့်စတင်ရန်အကြံပြုလိုသည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏အသုံးချမှုနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောတုံ့ပြန်မှုမရှိကြောင်းသင်သေချာသည့်အခါ၎င်းသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာနိုင်သည်။ IDRA-21 nootropic ပုံ IDRA-21 ကိုသင်ကိုယ်တိုင် သုံး၍ ရသောအချက်အလက်များအပြင်အခြားသိမှုဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရန်အခြား nootropics သို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်မှုများနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော excitotoxicity နှင့်လုံလောက်သောသုတေသနမရှိခြင်းကြောင့်၎င်းကိုသင်နှေးကွေးစေသင့်သည်။ IDRA-21 ကိုအခြား ampakine ဆေးများနှင့် Aniracetam ကဲ့သို့သော stack လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အချိုမှုအဆင့်ကိုမြင့်တက်စေသောအခြား nootropics များကိုလည်းရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။
4. IDRA-21 ၏အကျိုးကျေးဇူးများကဘာလဲ။
မဆိုလှုံ့ဆော်လူတစ် ဦး ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ရန်သင့်တွင်မောင်းနှင်မှုရှိပါကသင်၏ပန်းတိုင်များသို့ရောက်ရန်အသင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည်မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုမဆိုလုပ်ဆောင်ရန်လှုံ့ဆော်မှုမရှိပါကသင်၏တိုးတက်မှုအလားအလာကိုပျက်စီးစေသည်။ မှတစ်ခုဖြစ်သော IDRA-21 အကျိုးခံစားခွင့်များ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလှုံ့ဆော်မှုကို ဦး တည်စေခြင်းဖြင့်တစ်ဖန်စွမ်းအားကိုမြှင့် တင်၍ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်သင်သည်မိမိကိုယ်ကိုအလွန်ပင်တွန်းအားပေးနေသည်ဟုမခံစားရဘဲသင်၏ပန်းတိုင်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များကိုအောင်မြင်နိုင်သည်။
ပြီးပြည့်စုံသောရလဒ်များသည်အားထုတ်ရုံမျှမကလိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏အရာအားလုံးကိုထည့်သွင်းထားနိုင်သော်လည်းသင်အောင်မြင်လိုသော ၁၀၀% တိကျမှန်ကန်မှုကိုသင်ရရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းသဘောပေါက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းသောအရာဖြစ်၏ IDRA-21 အမှုန့် သင်လိုချင်သောရလဒ်အတိအကျကိုပြီးမြောက်ရန်လိုအပ်သည့်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုဖြင့်သင့်အားအာမခံသည်။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးသင်အမြင့်ဆုံးတိကျမှန်ကန်မှုကိုရရှိလိမ့်မည်ဟုစိတ်ချနိုင်သည်။
သင်အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှသင်၏တိုတောင်းသောသက်တမ်းမှတ်ဉာဏ်သည်ယခင်ကကဲ့သို့ထက်မြက်နေဆဲမဟုတ်ကြောင်းသင်သဘောပေါက်လိမ့်မည်။ သင်သိသာထင်ရှားဆုံးသောအရာများကိုပင်မေ့သွားသည်၊ ၎င်းကိုတွန်းလှန်ရန်တိုတိုမှတ်စုများသို့မဟုတ်မှတ်စုများကိုသင်၏မိတ်ဆွေဖြစ်လာသည်။ သင်၏တိုတောင်းသောသက်တမ်းမှတ်ဉာဏ်သည်နောက်တဖန်ထပ်တူထပ်မံမဖြစ်နိုင်ဟုသင်ခံစားရနိုင်သော်လည်းသင်ထိတ်လန့်စရာမလိုပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်လိုချင်သည့်အချိန်ကိုမဆိုသင့်တိုတိုမှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုခြင်း 22503-72-6 သင်တတ်နိုင်သမျှထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် တိုတောင်းသောသက်တမ်းမှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုဒုက္ခနှင့်အတူကိုင်တွယ်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်၏နေ့စဉ်ဘ ၀ ၌သင်ဘာလိုအပ်သည်ကိုမှတ်မိနိုင်သည်။
သင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါသလား၊ စဉ်ဆက်မပြတ်စိတ်ပူနေသလားသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုခံစားနေရပါသလား။ မင်းရဲ့အစာစားချင်စိတ်ကိုလျော့ကျစေပြီလား။ သင်အိပ်ရန်ရုန်းကန်နေပါသလား။ သင်၏အဖြေသည်ဟုတ်ကဲ့လျှင်သင်စိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရနိုင်သည်။ သင်သိသည့်အတိုင်းစိတ်ကျရောဂါသည်သင်၏ဘ ၀ ကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ ကံကောင်းတာက IDRA-21 ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုကျော်လွှားရန်မခက်ခဲပါ။ သင့် ဦး နှောက်ကိုတိုးမြှင့်ပေးခြင်းဖြင့်စိတ်ကျခြင်းကိုတိုက်ဖျက်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကုထုံးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုရှိပြီးစိုးရိမ်စိတ်ဝင်လာသည်နှင့်အမျှသင်မည်သည့်အချိန်၌မဆိုသင့်ကိုပိုမိုသက်သာစေနိုင်သည်။
သင်စွမ်းဆောင်ရည်အလွန်ကောင်းမွန်လိုပါကမှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိသောကာလရှည်ကြာအာရုံစိုက်နိုင်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုသည်ပျော့ပျောင်းနေသည်ကိုသင်သတိပြုမိပါက IDRA-21 ကိုသုံးနိုင်သည်။ အွန်လိုင်း IDRA-21 ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များအရ၎င်းသည်သင့်အားအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ရန်နှင့်၎င်းကိုထိုက်တန်သောအာရုံစိုက်မှုပေးရန်ကူညီသည်ဟုပြောဆိုမှုများရှိသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအပြင်ဘက်ကအာရုံပျံ့လွင့်စရာတွေအားလုံးကိုတောင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုက်နိုင်အောင်ကူညီပေးလို့ပါ။
တ ဦး တည်းရဲ့အာရုံခံအမြင်တစ်ခုတိုးလာ
အာရုံခံအမြင်သည်လူတိုင်းတွင်ရှိသင့်သည့်ဆth္ဌမမြောက်အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရာဝတ္ထုများကိုသိနားလည်နိုင်ရန်နှင့်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာနားလည်ရန်စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ IDRA-21 သည်သင်၏အာရုံခံသိမြင်မှုအားသင့်အားပိုမိုပြတ်သားစေသည်။
ယနေ့ IDRA-21 အသုံးပြုမှုသည်အိုမင်းခြင်းဖြစ်စဉ်၊ သိမြင်မှုယိုယွင်းခြင်း၊ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါကဲ့သို့သောအာရုံကြောဆိုင်ရာအခြေအနေများစွာခံစားနေရသောလူနာများကိုကုသမှုနှင့်ကုသမှုတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သိမြင်မှုစွမ်းရည်များကိုမသတ်မှတ်ပါ။ လူများစွာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးရိုးဗီဇသည်၎င်းတို့ကိုဆုံးဖြတ်သည်ဟုထင်လေ့ရှိသဖြင့်မြင့်မားသောသိမှုအဆင့်ကိုသင်ရရှိနိုင်သည့်နည်းလမ်းများရှိသည်။ IDRA-21 သည်အသိဥာဏ်တိုးတက်စေရန်အသုံးချသည့်သိမြင်မှုတိုးမြှင့်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
5. IDRA-21 ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
လူအများအပြားတွင်ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိသောကြောင့်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်၍ လှည့်စားကြသည်။ အကြံပြုထားသောသောက်ဆေးဖြင့်သင်သည် IDRA-21 ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်ကြုံတွေ့ရမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်အချို့သူများသည် nootropics သို့မဟုတ် ampakines အသုံးပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ထိုသို့သော IDRA-21 ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ပါဝင်သည်;
အချိုမှုနဗ်ကြောဆဲလ်များတိုးများလာခြင်းသည်ဤ IDRA-21 ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုမကြာခဏဖြစ်ပေါ်စေသည်။ များသောအားဖြင့် AMPA ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်အလွန်ပြင်းထန်ပြီး IDRA-21 ကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်သူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကသင့်ကိုမကြောက်သင့်ဘူး။ ဆေးသည်အလားအလာများစွာရှိသည်။ အကျိုးကျေးဇူးများသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်သာလွန်သည်။ သငျသညျအရှိဆုံးဖွယ်ရှိသည်သူတို့ထဲကတစ်ခုခုကိုမှခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်မကြာသေးမီကလေဖြတ်ခြင်းဖြစ်ခဲ့လျှင်သင်၏အခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည့်အတွက်ဤဆေးကိုမသုံးသင့်ပါ။
6. IDRA-21 အပေါ်လေ့လာရေး / သုတေသန
အတိတ်ကာလ၌ IDRA-21 ၏အားသာချက်နှင့် AMPA အပေါ်မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုလေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ IDRA-21 ကိုဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်များတွင်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးရေ ၀ င်္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။ ဒါဟာကြွက်နှင့်အတူအုပ်ချုပ်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် IDRA-21 သိသိသာသာမသောသူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုကောင်းတဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကပထမ ဦး ဆုံးဝင်္ထွက်ပေါက်သို့ရောက်ရှိခြင်းဖြင့်သက်သေပြခဲ့သည်။ IDRA-21 နှင့် huperzine တို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းစမ်းသပ်မှုများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
7. IDRA-21 အမှုန့်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးပွားစေပါသည် Edwin R. "ဒီ nootropic စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစူးစိုက်စောင့်ရှောက်ခြင်း၌ရှိသမျှသည်အခြားတ္ထုများရိုက်နှက်။ ဒါကိုကျွန်တော်သက်သေပြနိုင်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စတင်လေ့လာကတည်းကကျွန်ုပ်လေ့လာမှုနှင့်အလုပ်လုပ်ပုံခြားနားချက်ကိုသတိပြုမိလို့ပါ။ ငါအလုပ်ပြီးနောက်လေ့လာမှုအများကြီးလုပ်, နှင့်အတိတ်ကာလ၌ငါအလုံအလောက်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုမပေးနိုင်ခဲ့ဘူး အစဉ်မပြတ်ငါတစ်ခုပျက်ကွက်ပေမယ့်ဒီနေ့ခေတ်ကမဟုတ်ပါဘူး။ ငါ့အလုပ်ရှင်ကငါဟာအလုပ်များလာပြီလို့ပြောတယ်၊ ငါကဆရာကအခုငါဟာပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်တတ်တဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ ငါ IDRA-21 ကိုယူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အဆင်ပြေစေသည့်အချက်ကိုလည်းကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်၊ နေ့အချိန်မရွေးရေတစ်ခွက်နှင့်ယူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ IDRA-21 သည်ကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေသည့်အရာသာဖြစ်သည်။ ငါ့ကိုစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်ကူညီပေးခဲ့သည် Essy J. က“ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်စိတ်ဖိစီးမှုအနည်းငယ်ကိုခံစားနေရပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဖိစီးမှုများသောအလုပ်၊ ကလေးအသစ်နှင့်အလုံးစုံသောဘဝများကြောင့်ကျွန်ုပ်အားထိခိုက်နစ်နာစေသည်။ ငါမူးယစ်ဆေးဝါးစုံတွဲတစ်တွဲကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ကံကောင်းထောက်မစွာ, မိတ်ဆွေတစ် ဦး ကငါသင့်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည် IDRA-21 အမှုန့်ကိုဝယ် စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတိုက်ခိုက်မှုများကိုတိုက်ခိုက်ရန်။ ကောင်းပြီ, ဒီဆေးကိုသုံးခုသာရှိခဲ့ပြီ, ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေခဲ့သည်။ ခံစားချက်အပြောင်းအလဲများမခံစားရဘဲတစ်နေ့လုံးကျွန်ုပ်စဉ်းစားနိုင်သည်။ သူတို့ဟာအဆုံးကိုထိလိုက်ပြီလို့ခံစားရသူတိုင်းကိုချီးကျူးပါတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏သမီးကိုမေ့လျော့တတ်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည် ဝီလျံအက်စ်က“ ကျွန်တော့်သမီးမှာ ADHD ပြင်းထန်ပြီးငါးစက္ကန့်လောက်တောင်အာရုံစိုက်ရတာဟာတော်တော်လေးအလုပ်တစ်ခုပဲ။ သို့သော် IDRA-21 အမှုန့်သည်သူ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအလွန်တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှအသက်ကယ်သမားဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤထုတ်ကုန်ကြောင့်သူမသည်သူမထက်များသောအရာများကိုပြန်ပြောပြသည်။ ငါကသူမအပေါ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိကြောင်းသတိပြုမိကြပါပြီ, ဒါကြောင့်သူကပို။ ပင်အမှတ်အသားများဂိုးသွင်းစေသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ IDRA-21 ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်မရဲ့ကလေးဟာပုံမှန်ဘ ၀ မှာနေနိုင်ပါပြီ။ ”
၈။ IDRA-8 အမှုန့်ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ။
ဆောင်းပါးတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း IDRA-21 သည်သင်၏ဘဝကိုအပြောင်းအလဲတစ်ခုလုံးကိုပေးနိုင်သည်။ သင့်ကိုပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးသတိရှိရန်ပြုလုပ်ခြင်းအပြင်သင့်အားပျော်ရွှင်သောဘဝကိုဖန်တီးပေးနိုင်သည်။ ယခုသင်မည်သည့်နေရာမှအရင်းအမြစ်ရရှိနိုင်ကြောင်းသင်ယခုစဉ်းစားနိုင်ပြီဆိုတာသိပြီ။ လူတို့ရင်ဆိုင်ရသောအရေးအကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှာယုံကြည်စိတ်ချရသော IDRA-21 အရင်းအမြစ်ကိုရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤထုတ်ကုန်သည်အစောပိုင်းလက်တွေ့လေ့လာမှုများတွင်ရှိသေးသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းကရှားပါးသောကျောက်မျက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အရည်အသွေး IDRA-21 ပေါ်တွင်ဘယ်တော့မျှသင်၏လက်ကိုဘယ်တော့မျှတင်မည်မဟုတ်ဟုမဆိုလိုပါ။ သင်အမြဲလုပ်နိုင်တယ် IDRA-21 ကိုဝယ်ကြလော့ အွန်လိုင်း ၎င်းကိုသင်၏တည်နေရာသို့ပို့ပေးပါ ယင်းကသင့်အားဈေးဝယ်ရန်ဈေးဆိုင်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၏ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုကယ်တင်သည်မဟုတ်လော။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူအမှာစာနှင့်ပိုကောင်းသောလှုံ့ဆျောမှုနှင့်တိုးတက်လာသောစွမ်းဆောင်ရည်ရန်သင်၏ခရီးစတင်။
Jerry J. Buccafusco မှစာမျက်နှာ ၉၂-၉၃ မှတည်းဖြတ်သောသိမှုတိုးတက်စေသောဆေးဝါးများ
Ampakines: Ampakine, Cx717, Idra-21, Ly-503,430, Aniracetam, Pepa, Farampator, Cx-516, Unifiram, Sunifiram, LLC စာအုပ်များ, အထွေထွေစာအုပ်များ LLC, 2010, စာမျက်နှာ 1-36
ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးဝါးများ - ရောဂါ၊ ဆေးညွှန်းနှင့်ဆေးဝါးများ၊ Nicolae Sfetcu မှ
၁။ IDRA-1 အမှုန့်ကဘာလဲ။
၂။ IDRA-2 ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
IDRA-3 ၏ညွှန်ကြားချက်ကိုအသုံးပြုခြင်း 21.Recommended ဆေးညွှန်း
4. IDRA-21 ၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာအဘယ်နည်း။
IDRA-5 ၏ 21.Side Effects
IDRA-6 အပေါ် 21.Studies / သုတေသန